पत्रकार अर्जुन गिरीलाई लगाइएको मुद्दा तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछु – kalikadainik.com
पत्रकार अर्जुन गिरीलाई लगाइएको मुद्दा तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछु
मंगलबार, बैशाख ०३, २०७६ | २१:५९:३८ |
त्यो प्रिय साथी :-
जो हामीसँगै समाचार लेखिरहेका छन् । संगठनमा हामीले जस्तै जिम्मेवारी लिएर दौडिरहेका छन् । पत्रकार र संगठनलाई केही पर्दा हाम्रो जस्तै उसको पनि छाती चरक्क चर्किन्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षमा लाग्दा हामीले जस्तै उसले पनि धेरै पटक लाठी सहेका छन् ।
हो ! उही प्रिय साथी समाचार लेखेकै कारण प्रहरीको हत्कडी भिरेर हिरासतमा कोचिएको छ । प्रिय साथीहरु, मलाई माफ गर्नुहोला ! यस्तो बेला सरकारी बाँसुरी बजाएर बस्न सकेनौं, सक्दैनौं । प्रहरीले भरेको संगीतमा स्वर हालेर बस्न पनि सकिएन । साथीहरु सके हिरासतमा रहेका अर्जुनजीको पक्षमा बोल्नुहोस् । नसके चुपो लागेर बस्नुहोस् ताकी पछि फर्केर हेर्दा आफ्नो अनुहार हेर्दा आफैलाई लाज नलागोस् । हाम्रो पहिलो कसम प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो । खाएको कसम भुलेका छैनौं । हामी अर्जुनजीको साथमा छौं । अर्जुनजीको हातमा लागेको हत्कडीले हामीलाई पनि पोलिरहेको छ ।
प्रहरीले सोमबार बेलुकी गरेको प्रतिबद्धता बिपरित अर्जुनजीलाई आज म्याद थपेको छ । हत्कडी लगाएर गाडीमा कोचेको छ । बेलुकी हिरासतमा राखेको छ । आज दिनभरी सिआइबीदेखि, सरकारी वकिल, अदालतसम्म हामीले प्रहरीलाई पछ्याइरहेका थियौं । माथिको आदेश भन्दै तिनले अपराधीलाई जस्तो हर्कत गरिरहेका थिए । त्यो माथिको आदेश भनेको के हो ? यो आदेश कसको हो ? खोजी गरुम् ।( राजेश राइको facebook बाट )